Fiarabe feno vary akotry sy nitondra mpandeha 21 avy any Ambohitromby ho any Tsiroanomandidy no tra-pahavoazana. Araka ny vaovao ofisialy teo amin’ny zandarimariam-pirenena Ankadilalana, tamin’ny fotoana fakana rivotry ny mpandeha no nikorisa tampoka ilay fiara vaventy ka maty tsy tra-drano voahitsaka ny olon-dehibe telo sy ny zaza telo koa. Ireo roa naratra kosa nentina namonjy haingana ny mpitsabo tsy miankina izay tany an-toerana, Ankarahara Soanierana. Ireo zandary avy ao amin’ny paositra Soanierana no nandray an-tanana ny fanadihadiana sy ny fitsirihina ifotony ary ny fiambenana ireo entan’ny mpandeha sy ny vary. Nentina tany amin’ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena any amin’ny renivohitry ny Faritra Bongolava ilay mpamily sy ny mpanampy azy hanatanterahana ny fanadihadiana. Mbola eo am-piantsoana ireo fianakavian’ny maty ny zandary sy ny manampahefana any an-toerana. Marihina fa noho ny tahotra ny asan-dahalo dia tsy mandà mpandeha ireo fiara mpitatitra entana mba ho naman’izy ireo eny an-dalana. Vitsy koa ireo fiara mpitatitr’olona ka voatery mandeha fiarabe ireo mponina any ambanivohitra.